नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा १५ सेसन, भर्चुअलरुपमा हुने
पोखरा, ४ पुस । पोखरामा नियमित रुपमा संचालन हुँदैआएको नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको कोरोना महामारीका कारण यसपालि भर्चुअलरुपमा हुने भएको छ ।
फेस्टिभलको नवौं संस्करण पर्यटकीय क्षेत्र सराङ्कोटमा पुस १४ र १५ मा हुने पोखरामा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजक बुकवर्म फाउण्डेसनले जानकारी दिएको छ ।
आईएमईको प्रायोजनमा हुने सो महोत्सवमा यसपालि १५ सेसनमा ४० जना वक्ता जुट्नेछन् । फेस्टिभलका सबै सत्रहरु सामाजिक सञ्जाल एवं फेस्टिभलको आधिकारिक यूट्यव च्यानलबाट लाइभ प्रसारण हुने फेस्टिभलका निर्देशक अजित बरालले जानकारी दिए । फेस्टिभलमा साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, कलाकार, विशिष्ट व्यक्तित्वका वक्ता रहनेछन् ।
फेस्टिभलका कार्यकारी निर्देशक नीरज भारीले कोरोनाकालको समयमा समेत भौतिक रुपमा भए पनि फेस्टिभललाई निरन्तरता दिने हेतुले आफूहरु अघि बढेको बताए ।
‘जहाँ शब्दहरु जीवन्त हुन्छन्’ भन्ने मूल नाराका साथ सन् २०११ देखि झम्सिखेलबाट सुरु भएको फेस्टिभलले कला, साहित्यको मात्र प्रवद्र्धन नभई विचार निर्माण र समाजको आलोचनात्मक चेतलाई समेत उचाइ दिँदैआएको आयोजकको दाबी छ । यसप्रकारको साहित्यिक बहस र विमर्शले सर्जक र पदासिन व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन, विचार मन्थन गरी समाजलाई मार्गदर्शन गर्नुका साथै लोकतन्त्र शक्तिशाली बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
फेस्टिभलका सहआयोजक संस्था र्‍यान्डम रिडर्स सोसाइटीका अध्यक्ष केशवशरण लामिछानेले साहित्यका माध्यमबाट पोखरा चिनाउनु फेस्टिभल र आफूहरुको प्रयास रहेको बताए । उनले सञ्चारमाध्यमसँगै शुभचिन्तकको बलियो साथले फेस्टिभल सफल हुने अपेक्षा गरे ।
आयोजक संस्थाकी सदस्य अनिकर्मले फेस्टिभलको माध्यमबाट पोखरेली युउवामा पठन संस्कृति विकास गर्न सफल भएको बताइन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको गण्डकी प्रदेश सरकारका लागि पनि फेस्टिभलले टेवा पुर्‍याउने विश्वास गरिएको फेस्टिभलका सदस्य भरत कोइरालाले जानकारी दिए ।
यी हुन् अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी बिकेका 'टप टेन' पुस्तक
कोरोना भ्याक्सिन र बिल गेट्सको चिप्स
डा. रवीन्द्र समीरका तीन लघुकथा
स्वदेशी हैप्पी न्यू इयर (कविता)
काँग्रेस र नेकपा कार्यकर्ताबीचको झडपमा वडाध्यक्ष शाहीसहित ४ जना घाइते, अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी
राजा र जनताको एकताले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सबल हुन्छः डा लोहनी
इन्डोनेसियाको गुफामा फेला पर्‍यो ४५ हजार वर्ष पुरानो चित्रकला (भिडियो)
मर्न लागेका व्यक्तिलाई बचाउन पिलाइयो रक्सी !
‘नागरिक एप’ लाई थप प्रभावकारी बनाउन टेलिकम सक्रिय, आफ्नो नाममा सिम भए/नभएको कसरी थाहा पाउने ?
धुम्रपान छोड्न चाहनुुहुन्छ ? यस्ता कुरा खान थाल्नुस् !
पानी पिउँदा ध्यान दिनुपर्ने यी १० कुरा
शरीरका यी पीडालाई बेवास्ता नगर्नुस्, ठूलो दुःख पाइएला